Rapid Aluminium Profile Aluminium Foaming Door China Manufacturer
Tsanangudzo:Rapid Aluminum Profile,Aluminium Foaming Door,Rapid Aluminum Foaming Door
Home > Products > High Speed ​​Door > Aluminium Spiral High Speed ​​Door > Rapid Aluminium Profile Aluminium Foaming Door
Rapid Aluminium Profile Aluminium Foaming Door
Muenzaniso Nha.: AL-0AL-06
Dhizha rakasimba rakavhara musuo mutsva mutsva wesimbi yemhizha inoshandiswa iyo inobatanidza kupisa kwekushisa, simba rekuchengetedza, kuisa chisimbiso, kushanda zvakanaka, kupikisa kwemhepo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Nhanho yekuzarura inogona kusvika kusvika pamamiriyoni mashanu pamusi wechipiri, iyo inofanirwa kuti inowanzofambisa uye inokurumidza kumhanya. Uwandu hwealuminium pepurasitiki yepurasitiki yemasasa ndiro 0.7mm, uye polyurethane mapuropa pakati. Uwandu hwepakiti yemukova ndewe 40mm, uye upamhi huna 185mm uye uremu hwemita imwechete pasi pe163kg. Iyo ine unhu hwekuchengetedza kwakanaka kwekupisa, kureruka kwemaoko, simba rakasimba uye kushamiswa kushorwa , Anti - mhepo yepamusoro inopfuura 12 uye anti - kuba . Uyu mukova wemukova unofanirwa mukati mekunze uye kunze kwekugadzirisa nekugadzirisa kushandiswa zvakasimba. Kugamuchira mufananidzo uyu wemusuo kunogona kuchengetedza simba rakawanda rinokonzerwa nemhepo inoparadzirwa, iyo inenge inenge 80% yakawanda inoponesa magetsi pane kuputira musuo uye kuputira gonhi revhareti. Rudzi rwekuvhara nokukurumidza nekuvhara musuo kuita kuti bhizimusi mukugadzira nekugadziriswa kwekufambisa kwekufambisa kwakasimbiswa zvikuru, uye mukova ndiyo chete nzira yekuita basa rekugadzirisa nekugadzira, kushandiswa kwayo uye kusarudzwa kwebhizimisi kune ukama hwepedyo pamwe nekugadzirwa uye kunyanya kwe logistics . Ichi chigadzirwa chine kuvimbika kwakasimba, kuzviita, kushanda nyore uye zvinhu zvinokurumidza kugadzirisa . Iko rinotungamirirwa nehurumende rinotora shato, simba rekuponesa uye rakarurama rakaoma musuo wekuvhara mhepo kuitira kuti huve nechokwadi chekushanda kwemuviri wemukova uye kuve nechokwadi chekuwedzera kusina matambudziko 150 000 nguva gore.
Shenzhen Hongfa Automatic Co, .Ltd ikambani yepamusoro-tech iyo inopinda mukusimbiswa kwenyika-class yakafambiswa nemasuo emagetsi. Zvigadzirwa zvedu zvinokosha zvinosanganisira purogiramu inokurumidza kuputika, mashizha ekugadzira mashizha, mashizha ekugadzirwa kwemabhiza, gonhi rePVC rinopfigira, suo rinokurumidza kuputika, gonhi rinopisa moto, suo rekusimudzira remhizha, gonhi rinopinza rinopinza, gonhi rinoputika rakagadzirwa nemasuo, chiremba rinowanzovhara gonhi, simbi isina tsvina gonhi, magetsi masuo egorosi, girasi yekristini yokugumbusa, magetsi evhavha yezvigadzirwa zvakasiyana-siyana, nekupaka.
Automatic Aluminium Spiral High Speed ​​Rolling Door Bata Ikozvino
Rapid Aluminum Profile Aluminium Foaming Door Rapid Aluminum Foaming Door Rapid Aluminum Door Rapid Aluminium Doors Rapid Aluminium Roller Shutter Rapid Aluminium Alloy Door Rapid Aluminum Alloy Turbine Door